I-Semalt Expert Partage Des I-Astuces De Marketing Wonke ama-Champion Du Référencement Doit Savoir
Kulokhu kukhangiswa, i-optimization des moteurs de recherche (SEO) ibaluleke kakhulu ekuthuleni abantu abaningi abafuna ukuqhuba isikhathi eside. I-optimization du contenu is lula imoto ibandakanya amaqhinga awaziwayo. Nokho, ezinye agences de marketing digital discovery lolu hlelo lokusebenza agité xaxa uma bengakhohlwa lutho. I-optimisation du moteur de recherche de vidéo is needed pour chaque contenu en ligne. Kusukela ngo-2006, i-Google ithenge i-YouTube futhi ivela, ukusetshenziswa kwe-referencement sur les vidéos vidéo kuyinto ebaluleke kakhulu kunokuthelela konke okunye okuqukethwe ku-inthanethi.
Iningi lamazinkampani lithola ukusetshenziswa kwamavidiyo ezinhlobonhlobo ezahlukene. Ngokwesibonelo, eziningi ze-FAQs kanye nama-tutoriels azidingeki neze izindlela zokuzijabulisa ngevidiyo. I-Ayant ikwazi ukubaluleka kokufakela amavidiyo, ungase ufune ukufaka isicelo.
u-Andrew Dyhan, umqondisi we-réussite des clients Semalt , chaza iziphakamiso eziyisikhombisa ezizokwenza ukuthi lezi zinhlelo zinikeze i-meilleur classement:
Kubalulekile ukufaka amagama ama-key in the story-board of your message. Une video kufanele isebenze njengendlela isihloko phezu un article blog. Amavidiyo kufanele aphelele, ulwazi kodwa ama-courtes. Kunezibalo eziningi ezibonisa ukuthi izindlela zokusebenzisa ama-pass pass cishe 2 imizuzu phezu kwevidiyo. Hlola isikhathi sakho sevidiyo: cishe 5 imizuzu..Lezi zincwadi zifaka ukufaka ama-universelle de votre contenu futhi unikeze i-plateforme ulwazi olunikezwa amakhasimende akho asebenzayo ukuze uthole ukuchofoza kanye nokuthola okuqukethwe okuhambisanayo. Amavidiyo athole ama-partages on platforms ezifana ne-YouTube. I-robots ye-Google ingayithola kabusha ama-plus ahlobene nalabo abazobe behamba phambili nakwezinye izici ze-Web sites.
Le nguqulo yevidiyo
Lo mbono, izinhloso kanye nokubaluleka kwevidiyo ye-plan de référencement yizona eziyinhloko ezidingekayo. Ungakwazi ukufaka uhlelo lokusebenza lwe-marketing campaign nge-mission mission. Nokho, izinhloso zevidiyo zinomthelela obalulekile ekubhekaneni nabantu abasebenzisa. Ngokwesibonelo, une video conçue pour l'image de marque peut être informative et inclure les procédures d'achat maintenant. Nokho, une vidéo de compagnie d'assurance pour les éducatifs des éducatifs peut ne pas les avoir. Noma ngabe yiziphi izinto eziyinhloko kuma-placement des mots clés.
Ithonya kanye nokukholisa
Uma ngabe umuntu efuna ukuthola ividiyo, i-number of views iyinhlangano enkulu abantu abaningi abayibona. I-video ne-leads noma izinkomba ezingabangela ukuhlukanisa kanye nokuhlukaniswa yizinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu ukuze uthole ama-periodical feedback. Kunezici ezimbalwa ezingakhipha i-video atteindre ce niveau de suivi. Ngokwesibonelo, i-incorporation du traitement auditif. Ungakwazi ukufaka ama-sous-titres, des légendes et du texte explicatif sur la vidéo. Le nqubo ivuselela ngendlela enhle kakhulu ekuboneni izimpendulo ezithintekayo kanye nezokucwaninga.
In the SEO d'aujourd'hui, la création de contenu et le marketing marketing sont des techniques nouvelles qui ont un impact significatif sur de nombreuses tactiques de référencement. Amakhompiyutha kanye nami ngiyabonga ukuthi usebenzise le tactique ngokukhethekile ukuze ukhulume lo mphakathi okubhekisela kumavidiyo ukuze uthole izincazelo. Ngaphandle kokuthi lezi zici ezimbili zihlukile, ziyizinhlelo zokukhangisa ze-digital kanye nokukwazi ukukhulisa ukuguqulwa. Lezi zithombe zichaza kahle futhi ezenzakalelayo umphakathi ngokuqondene nezici ze-incitation à l'action de votre site Web. Ngenxa yalokho, ividiyo yokuthengisa ingaba nesisombululo sokufakwa ohlwini lwakho Iwebhusayithi, ikakhulukazi les engines de recherche.